बाँके खवर | bageshworipost.com
Home बाँके खवर
बाँके १ क बाट माओबादीकी आरती पौडेल बिजयी
नेपालगन्ज,२४ मंसिर । प्रदेश सभा अन्तर्गत बाँके छेत्र नम्बर १क मा माओबादीकी आरती पौडेल १९३८९ मटी ल्याई बिजयी। उनका निकटम प्रतिद्वंदी कांग्रेसका नारायण गौडेललाई पौडेलले ४१९० मत ले पराजित गरेकी... Read more
बाँके क्षेत्र नम्बर ३ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेका बाबुराम गौतम विजयी
नेपालगन्ज, २४ मंसिर । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपा एमालेका बाबुराम गौतम विजयी भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न मतगणनाबाट ४२४५ मत अन्तरसहित उनी विजयी भएका हुन् । गौतमले ११८७७... Read more
बाँके १ र ३ मा वाम गठबन्धनको अग्रता
नेपालगन्ज, २४ मंसिर । बाँकेका प्रतिनिधि सभाका दुई क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। क्षेत्र नं. १ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महेश्वर गहतराज अगाडि छन् भने ३ मा एमालेका... Read more
बाँके १ क बाट माओबादी केन्द्रकी नमूना बिजयी
नेपालगन्ज, २३ मंसिर । बाँके क्षेत्र नम्बर १ क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा माओबादी बाट कृष्ण्णा केसी नमूना विजयी भएकी छीन। भर्खरै सम्पन्न मतगणनाबाट ३५४६ मत अन्तरसहित उनी विजयी भएका हुन् । केसीले १... Read more
बाँके क्षेत्र नम्बर २ क बाट नेपाली काँग्रेसका सुरेन्द्र हमाल विजयी
नेपालगन्ज, २३ मंसिर । बाँके क्षेत्र नम्बर २ क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका सुरेन्द्र हमाल विजयी भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न मतगणनाबाट ७७९ मत अन्तरसहित उनी विजयी भएका हुन् । हमालले ९... Read more
बाँकेमा वामगठबन्धनबाट आइपी खरेल विजयी
नेपालगन्ज ,२३ मंसीर । बाँकेमा वाम गठबन्धनले खाता खोलेको छ । बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रदेश सभा ‘क’ मा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार इन्द्रप्रसाद खरेल आइपी विजयी भएका छन् । आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी... Read more
बाँकेमा विहान ११ बजेदेखि मतगणना शुरु हुने
नेपालगञ्ज, मंसिर २२ । बाँकेमा विहान ११ बजेदेखि मतगणना शुरु हुने भएको छ । भर्खरै सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले ११ बजेदेखि मतगणना शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकेमा प्रतिनिधि सभा तर्फ ३ र प्रदेश सभ... Read more
नेपालगन्ज, मङ्सिर : करिब साढे दुई दशकदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय निरञ्जन सिंह सिजापति पहिलो पटक सदनमा उक्लेर आमजनताको सेवा गर्ने सोंचमा छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै नेपाली कांग्रेसमा ल... Read more
नेपालगञ्ज, मंसिर १५ । प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवारहरुलाई अब ३ दिनको मात्र समय रहँदा बाँकेमा पनि प्रचारप्रसारको हतारो छ । मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न उम्मेदवारहरुले अन्तिम कसरत थालेका छन... Read more
नेपालगन्ज १४ मंसिर । बाँकेको समग्र विकास र समृद्धिका लागी लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउन अपिल गरिएको छ । नेपालगन्जमा बिहीबार लोकतान्त्रिक गठबन्धनले गरेको बृहत रोड–शो पश्चात त्रिभुवन चोकमा आय... Read more